Kofi Annan oo geeriyooday - BBC News Somali
Xoghayihii hore ee Qaramada Midoobay, Kofi Annan ayaa geeriyooday isagoo 80 jir ahaa.
Wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee Afrikaanka madow ah ee qabta jagada ugu sarraysa diblomaasiyadda dunida, wuxuuna xilkaas hayey 1997 - 2006.
Wuxuu ku guulaystay abaalgudka nabadda Nobel ee dhanka bani'aadminimada.
Xilliyadii dambe wuxuu noqday ergayga Qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Suuriya, isagoo hogaaminayey dadaalka ku saabsan sidii xasaradda dalkaas ka taagan xal loogu heli lahaa.
Maxamed Biixi Yoonis, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland, ayaa ku tilmaamay Kofi Annan inuu ahaa "halyey Afrikaan ah oo u soo halgamay nabadaynta caalamka, aadna ugu dhow dadkeenna oo ah nin Afrikaan ah oo aad u wanaagsan".
Muddadii uu Koffi Annan ahaa xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay waxaa dhacay dagaalladii uu Maraykanku ku farageliyey Afgaanistan iyo Ciraaq. Haddaba sidee buu u arkaa maxamed Biixi qaabkii uu Kofi Annan uga soo gudbay?
"Waxaan u arkaa inuu ahaa nin hal adag, nin aad isugu kalsoon, nin sannadihii ugu dambeeyey uu Maraykanku cadaadis badan saaray, gaar ahaan Holbrooke, safiirkii Maraykanka u fadhiyey Qaramada Midoobay, laakinse wuxuu aad ugu adkaa in wax walba nabad lagu xalliyo".
Sabtidii ayuu ku geeriyooday dalka Switzerland, ka dib xanuun muddo yar hayey.